Rosiana sy Alemanina mpizahatany dia mbola tia an'i Antalya
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rosiana sy Alemanina mpizahatany dia mbola tia an'i Antalya
Antalya nov24 shutterstock 1
Antalya, Torkia dia namotika ireo firaketana momba ny fizahan-tany tamin'ity taona ity, izay mahatratra 15 tapitrisa mahery hatreto. Raha ny tarehimarika ofisialin'ny tompon'andraikitra amin'ny faritany dia 15,567,000 ny mpizahatany nitsidika an'i Antalya tamin'ny taona 2019, nametraka firaketana momba ny fizahan-tany hatrany amin'ireo mpitsidika avy amin'ny firenena 193.
Matetika heverina ho toy ny "renivohitra fizahan-tany" any Torkia, Antalya dia ivon'ny mpizahatany mitady hankafy ny morontsiraka Mediteraneana madio ary koa ny tantara manankarena ao amin'ny faritra izay nanjakan'ny sivilizasiôna marobe.
Ireo mpizahatany rosiana dia nampiseho ny fahalianana lehibe indrindra tamin'ny faritany niaraka tamin'ny 5.5 tapitrisa mpizahatany nanomboka tamin'ny 1 Janoary ka hatramin'ny 31 Oktobra, 16 isan-jato mahery noho ny tarehimarika tamin'ny taona lasa.
Ny Alemanina dia nitana ny laharana faharoa teo amin'ny 2.5 tapitrisa, nanamarika fiakarana 16 isan-jato ihany koa amin'ny isan'izy ireo.
Laharana fahatelo i Okraina miaraka amin'ireo mpizahatany efa ho 800,000 686,000, raha ny isan'ny mpitsidika anglisy dia nisondrotra hatramin'ny XNUMX, ary nahatonga azy io ho fahefatra amin'ny lisitra.
Ny mpitsidika avy any Polonina dia nahatratra 535,000, miaraka amin'i Holanda tsy dia lavitra aoriana dia 424,000 ary Romania misy mpitsidika ampahefatry ny tapitrisa eo ho eo.
Ny tsenan'ny fizahantany dia nivelatra be tao Torkia, nanidina tamin'ny vanim-potoana 2018 ihany.
Ny minisiteran'ny kolotsaina ny fizahantany dia nanambara tamin'ny faran'ny volana oktobra fa nanintona mpizahatany 36.4 tapitrisa i Torkia tao anatin'ny 10 volana voalohany tamin'ny taona, nanamarika fiakarana 14.5 isan-jato, ary manana andraikitra lehibe i Antalya.
Marihina fa ny filohan'ny parlemanta tiorka Mustafa Sentop tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nilaza fa nitady handray mpizahatany 75 tapitrisa i Torkia tamin'ny 2023 ary hanangona vola miditra 65 miliara dolara.
Fivarotana kapany: morontsiraka miboridana sy tsy misy loha any Jamaika
Fianjerana fiaramanidina tany RDC: maty 23 ary manisa